Vidiyo isii dị mkpirikpi nke Apple Watch na ọtụtụ ọrụ ya | Akụkọ akụrụngwa
Obere vidiyo vidiyo nke Apple Watch na ọtụtụ ọrụ ya
Vidio ọhụrụ isii bụ ihe anyị nwere ike ịchọta na ọwa YouTube nke Applena-ezo aka na nhọrọ dị na Apple Watch. Ndị a bụ ụdị vidiyo dị mkpirikpi nke Apple na-egosi anyị ụfọdụ ọrụ smartwatch nke ọma na ozugbo.
Anyị na-ahụ otu n'ime esi chọta iPhone site na nche onwe ya, ọzọ na ọrụ nke Walkie talkie, ọzọ na nke ha gosiri anyị otu esi eji Apple Music were gaba n’ihu isii vidiyo dị nkenkena-arụ ọrụ nke nnukwu ngwaọrụ.
Nke mbụ nke vidio ndị a bụ nke na-egosi anyị ọrụ nke nhazi nke nsogbu na uzo. Na nke a, ha na-egosi Infograph ọhụrụ ahụ, mana ọ nwere ike ịbịaru ndị ọzọ na-eche nche ihu:
Vidio na-esonụ na-enye anyị Ọhụụ ọrụnke anyị mere n'ụbọchị. Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị ndị anyị na-eme egwuregwu na ọ bụ na ịmecha mgbanaka bụ "ihe nro":
Olee otú hazie ihe anyị hụrụ n'ọzụzụbụ ọdịnaya nke vidiyo na-esonụ. Hụ ọtụtụ nha n'oge ọzụzụ, ịhụ otu ma ọ bụ ọbụna ịmegharị mgbatị ọ bụla bụ nhọrọ ọzọ anyị nwere na Apple Watch, ee, na nke a ọ mere site na iPhone:
Olee otú jiri Apple Music na nche anyịmgbe anyị na-eme egwuregwu ma ọ bụ n'oge ọ bụla bụ ọdịnaya nke vidiyo na-esonụ. Ga - ahụ na vidiyo niile dị mkpụmkpụ mana ọ na - egosi n’ezie na ozi ha na - enye anyị.
Vidio na-esonụ na-akọwa otu esi ejiọrụ ahụ Walkie talkiena nche anyị. Ọrụ a na-atọ ụtọ n'ọtụtụ ọnọdụ yana ọtụtụ ihe ugbu a na ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ dabere na ebe na mgbe anyị bụ:
N'ikpeazụ vidiyo nke na-egosi anyị ọrụ nke chọta anyị iPhone si elekere emitting a ụda. Ọrụ a bara uru n'ezie ma karịa otu ejirila ya n'oge ụfọdụ, Apple na-egosi anyị otu o si arụ ọrụ:
Ugbu a ruo vidiyo vidiyo ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Obere vidiyo vidiyo nke Apple Watch na ọtụtụ ọrụ ya
Rite uru na ọnụ ala na ngwaahịa Koogeek na Amazon
Nnyocha nku U29S, a foldable FPV drone na VR iko na HD igwefoto